Public Kura | » सचिव फेरिएको फेरियै, विकास कछुवा गतिमा सचिव फेरिएको फेरियै, विकास कछुवा गतिमा – Public Kura
सचिव फेरिएको फेरियै, विकास कछुवा गतिमा
भैरहवा– प्रदेशसभा गठन भएको चार वर्षमा लुम्बिनी प्रदेशका विभिन्न मन्त्रालयहरूमा ५० जना सचिव फेरिएका छन् । सचिव फेरिरहँदा विकास निर्माणका काम प्रभावित भएका छन् ।
यसले प्रदेश सरकार गठन हुँदा जुन अपेक्षा थिए, त्यो विस्तारै क्षिण बन्दै गएको छ । सचिव फेरिएको फेरियै गरेपछि सरकारका काम गराई ढर्रा दु्रत छैन । यसबाट तीव्र विकासको अपेक्षा गरेका नागरिक आजीत छन् ।
कर्मचारीले रुची नदेखाउँदा लुम्बिनी प्रदेशको बजेट कार्यान्वयन नै फितलो छ । प्रदेशमा सरुवा भएर आएका सचिव लगायत माथिल्लो तहका कर्मचारी केही समय बसे पनि तत्कालै सरुवा मिलाएर जाने गरेका छन् । यसले बजेट कार्यान्वयनमा समस्या आएको मन्त्रीहरू नै गुनासो गर्दै आएका छन् ।
बजेट कार्यान्वयनमा कर्मचारीको ठूलो भूमिका हुन्छ, तर लुम्बिनीका मन्त्रालयहरुमा कर्मचारी बस्नै मान्दैनन् । जसका कराण बजेट खर्च गर्न समस्या भएको आन्तरिक मामिला तथा सञ्चारमन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता तिलकराम शर्माले बताउँछन् । ‘सचिव फेरिने प्रवृत्तिले पुँजीगत बजेट खर्च हुन नसकेको हो’, उनले भने ।
विगत ६ महिनायता लुम्बिनी प्रदेशको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा मात्र तीन सचिव फेरिएका छन् । आपूर्ति मन्त्रालयमा १३ भदौ २०७८ मा डा. राजेन्द्र केसी सचिवका रुपमा आएका थिए । ३१ असोजसम्म कार्यरत उनले यो अवधिमा वन, वातावरण तथा भूसंरक्षण मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हालेका थिए ।
वनमा उनी १३ महिना कार्यरत रहे । यस मन्त्रालय सम्हालिरहेको अवस्थामा उनलाई दोहोरो जिम्मेवारी सम्हाल्नुपर्ने अवस्था लुम्बिनी प्रदेशमा थियो । केसीपछि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा गत १५ कात्तिकमा पशुपतिनाथ कोइराला सचिव भएर आए । दोहोरो जिम्मेवारीकै रुपमा मन्त्रालयमा आएका उनले यहाँ २९ दिन विताए । १९ मंसिरसम्म मन्त्रालयको सचिवका रुपमा रहेका कोइराला यसै प्रदेशको वन मन्त्रालयबाट दुई महिना अगाडि अवकास पाएका छन् ।
उद्योगमा कोइरालापछि ३० पुसदेखि यामप्रसाद भुसाल जिम्मेवारीमा छन् । कानुन, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले आफ्नै सचिव पाउन सकेको छैन । प्रदेशमा मन्त्रालय फुटाएर यो नयाँ मन्त्रालय बनाइएको हो । गत २४ असोजमा प्राप्त गरेको यस मन्त्रालयले सचिव अझै पाउन सकेको छैन । मुख्यमन्त्री कार्यालयका सचिव राजेन्द्र थापाले नै यस मन्त्रालयको पनि सचिवको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका छन् ।
त्यस्तै यहाँको शिक्षा, विज्ञान, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय गत १५ कात्तिकदेखि ४ माघसम्म सचिवविहीन रह्यो । यहाँ उपसचिव निमित्त सचिवका रुपमा रहे । हाल एउटा मन्त्रालयबाहेक सबैजसो मन्त्रालयमा सचिव त आएका छन्, तर महिना नपुग्दै सचिव परिवर्तन हुने प्रवृत्तिले कामले गति लिएको छैन ।
महिनैपिच्छे सचिव फेरिने प्रवृतिले योजनाबद्ध विकासमा असर परेको प्रवक्ता शर्माको भनाइ छ । सचिवहरू समयमा नआएका, पटक पटक फेरिएका तथा दोहोरो जिम्मेवारीमा रहेकाले मन्त्रालयहरूको बजेट कार्यान्वयन नै फितलो देखिएको हो । प्रदेशमा दोहोरो जिम्मेवारीमा रहेको मन्त्रालय कानुन, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय हो । यसको चालु आर्थिक वर्षको सात महिनासम्मको पुँजीगत खर्च शून्य छ ।
यसको चालु खर्च शून्य दशमलव ९९ प्रतिशत छ । त्यस्तै महिना–महिनामा सचिव फेरिने उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको माघ मसान्तसम्मको पुँजीगत खर्च करिब आठ प्रतिशत छ । लुम्बिनी प्रदेशमा एक वर्ष बिताउने सचिवहरूको संख्या निकै कम छ ।
प्रदेशमा आउने सचिवहरू केन्द्र सरकारमा सहसचिवको भूमिकामा रहन्छन् । प्रदेशका मन्त्रालयहरूमा केन्द्रको सहसचिव सचिवको जिम्मेवारीमा रहन्छन् । लुम्बिनी प्रदेशमा हाल १३ वटा मन्त्रालय छन् । यहाँ हाल मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा एक जना प्रमुख सचिव र दुई जना सचिव छन् । यहाँ रहेका अन्य १२ वटा मन्त्रालयमा १२ जना सचिवको दरबन्दी छ, जसमध्ये एउटा मन्त्रालयमा सचिव नआउँदा मुख्यमन्त्री कार्यालयकै सचिवले दोहोरो जिम्मेवारी सम्हाल्ने गर्छन् ।
प्रदेशमा लामो समय सचिवका रूपमा बिताउनेमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव राजेन्द्र थापा पर्दछन् । उनले करिब तीन वर्ष यहाँ बिताइसकेका छन् । त्यस्तै यामनारायण देवकोटा पनि लामो समय कार्यरत रहनेमा पर्दछन् । उनी यहाँको कृषि मन्त्रालयमा १५ महिना बिताए भने अहिले कृषि निर्देशनालयमा कार्यरत छन् ।
एक वर्ष बिताउने सचिवहरूमा बसन्त अधिकारी, डा. खगेन्द्रप्रसाद सुवेदी, डा. राधा वाग्ले, डा.राजेन्द्र केसी, डा. रेवती रमण पौडेल, नुर मोहमद खाँ, थानेश्वर गौैतम, बाबुराम अधिकारी, रविलाल पन्थ, डा. गोपिकृष्ण खनाल र महादेव पन्थ छन् । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रवक्ता समेत रहेका बैठक तथा प्रशासन महाशाखा हेर्ने सचिव नरेन्द्रकुमार रानाका अनुसार प्रदेशमा आउने सचिवहरूले अतिरिक्त सुविधा प्रदेश सरकारबाट नपाउने बताए ।
संघीय सरकारले जे व्यवस्था गरेको छ सोहीअनुसार सचिवहरूको सुविधा रहेको बताए । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले सचिवहरूका लागि थप सुविधा नदिएको उनको भनाइ छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव वसन्त अधिकारीले सिंहदरबारमा बस्ने मानसिकता नहटेकोले प्रदेशको सचिव भएर सहसचिवहरू जान नचाहेको बताउँछन् । यसरी सचिव फेरिरहँदा लुम्बिनी सरकारको हरेक किसिमका काम प्रभावित भएका छन् ।